ကိုယ့်တစ်ဘ၀လုံးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရမဲ့လက်တွဲဖော်ကို ရွေးတဲ့အခါ… – Trend.com.mm
ကိုယ့်တစ်ဘ၀လုံးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရမဲ့လက်တွဲဖော်ကို ရွေးတဲ့အခါ…
ဘ၀လက် တွဲဖော်ဆိုတာ တာရုပ်ရှင်ထဲကလို အားလုံး ပြည့်စုံနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ညီမ လေး…. ပြောချင်တာ အခုလို ချစ်လို ကြိုက် လွယ်တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ရည်းစားတစ်ယောက်ရဖို့ ဆိုတာ မခက်ပင်မဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်ကောင်းဆိုတာ တော့သိပ်ကို ရှားပါးသွားပြီ။ တစ်ချို့က ထင်ကြတယ် ဘ၀လက်တွဲဖော် ကောင်းဆိုတာ ကိုယ့် အ ပေါ် အရမ်း ကောင်းသည်းသည်းလှုပ်ချင်နေရင် ပြီးတာ ပဲ ပေါ့တဲ့…ဒါက တစ်နည်းအားဖြင့် မှန်ပင်မဲ့ လက်တွဲဖော်ေ ကာင်းတော့မဟုတ်နိုင် သေးဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လူ တွေပြော ပြောနေကြတဲ့အချစ်စိတ်မွှန်တယ်ဆိုသလို ပေါ့…အချစ်စိတ်မွှန်ပြီးသင့်ကို ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာေ တာ့ သင်ဘာလုပ်လုပ် သူချစ် ကောင်းချစ်နိုင်လိမ့်မယ် ဒါက ချစ်သူအဆင့်ပဲ။ တကယ်တမ်းလက်တွဲဖော် တစ်ယောက် အ နေနဲ့ ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ တော့ ကိုယ့်အ ပေါ် ပဲ ကောင်းတာကြည့်လို့မရပဲ တစ်ပါးသူ၊ သူ့မိသားစု၊ တစ်ခြားမိန်းမသားေ တွ အ ပေါ်နဲ့ နောက်ဆုံး က လေးတွေအထိ သူဆက်ဆံတဲ့အခါ ဘယ်လို ဆက်ဆံတတ်လဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှအချစ်ဆိုတာ ထက်သံယောဇဉ်ဆိုတာ ကပိုပြီးများလာမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ့်အ ပေါ်ဆက်ဆံလာသမျှဟာသူ့ရဲ့ ကောင်း မွန်နဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ၊ တစ်ဖက်သားပေါ် ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနိုင်လို့ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဘ၀အတွက်လက်တွဲဖော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့် အ ပေါ် ပဲ ကောင်းနိုင်တာပဲမကြည့်ပဲ တစ်ခြားသူတွေကို ရောသင့်တင့်မျှတစွာဆက်ဆံတတ်ရဲ့လားဆိုတာကြည့်သင့်ပါတယ်..ကိုယ်လိုက်လို့မရနိုင်ေ အာင်မြင့်တဲ့ အ နေထားမျိုးလည်း မဖြစ်ရင်အဆင် မ ပြေသလို၊ ကိုယ့်ထက် ဥာဏ်နည်းပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့တဲ့သူမျိုးဆိုရင်လည်း ပေါင်းစပ်မှုက မတည်မြဲနိုင်တာမလို့ကိုယ်နဲ့ ဥာဏ်ရည်ခြင်းမကွာပဲ အကျင့် စာရိတ္တ ခြင်း ထပ်တူကျတဲ့ သူမျိုးကိုသာ လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်မှာ နှလုံးအေးရပါမယ်နော်…
ဘဝလကျ တှဲဖျောဆိုတာ တာရုပျရှငျထဲကလို အားလုံး ပွညျ့စုံနတောမြိုးမဟုတျဘူး ညီမ လေး…. ပွောခငျြတာ အခုလို ခဈြလို ကွိုကျ လှယျတဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ ရညျးစားတဈယောကျရဖို့ ဆိုတာ မခကျပငျမဲ့ ဘဝလကျတှဲဖျောကောငျးဆိုတာ တော့သိပျကို ရှားပါးသှားပွီ။ တဈခြို့က ထငျကွတယျ ဘဝလကျတှဲဖျော ကောငျးဆိုတာ ကိုယျ့ အ ပျေါ အရမျး ကောငျးသညျးသညျးလှုပျခငျြနရေငျ ပွီးတာ ပဲ ပေါ့တဲ့…ဒါက တဈနညျးအားဖွငျ့ မှနျပငျမဲ့ လကျတှဲဖျောေ ကာငျးတော့မဟုတျနိုငျ သေးဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ လူ တှေပွော ပွောနကွေတဲ့အခဈြစိတျမှနျတယျဆိုသလို ပေါ့…အခဈြစိတျမှနျပွီးသငျ့ကို ခဈြနတေဲ့အခြိနျမှာေ တာ့ သငျဘာလုပျလုပျ သူခဈြ ကောငျးခဈြနိုငျလိမျ့မယျ ဒါက ခဈြသူအဆငျ့ပဲ။ တကယျတမျးလကျတှဲဖျော တဈယောကျ အ နနေဲ့ ရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ တော့ ကျိုယျ့အ ပျေါ ပဲ ကောငျးတာကွညျ့လို့မရပဲ တဈပါးသူ၊ သူ့မိသားစု၊ တဈခွားမိနျးမသားေ တှ အ ပျေါနဲ့ နောကျဆုံး က လေးတှေအထိ သူဆကျဆံတဲ့အခါ ဘယျလို ဆကျဆံတတျလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယျ။ အခြိနျကာလကွာလာတာနဲ့အမြှအခဈြဆိုတာ ထကျသံယောဇဉျဆိုတာ ကပိုပွီးမြားလာမှာပါ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ ကိုယျ့အ ပျေါဆကျဆံလာသမြှဟာသူ့ရဲ့ ကောငျး မှနျနဲ့ အကငျြ့စာရိတ်တ၊ တဈဖကျသားပျေါ ထားတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ တိုကျရိုကျအခြိုးကနြိုငျလို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘဝအတှကျလကျတှဲဖျောရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ အ ပျေါ ပဲ ကောငျးနိုငျတာပဲမကွညျ့ပဲ တဈခွားသူတှေကို ရောသငျ့တငျ့မြှတစှာဆကျဆံတတျရဲ့လားဆိုတာကွညျ့သငျ့ပါတယျ..ကိုယျလိုကျလို့မရနိုငျေ အာငျမွငျ့တဲ့ အ နထေားမြိုးလညျး မဖွဈရငျအဆငျ မ ပွသေလို၊ ကိုယျ့ထကျ ဉာဏျနညျးပွီး ဆငျခွငျတုံတရားကငျးမဲ့တဲ့သူမြိုးဆိုရငျလညျး ပေါငျးစပျမှုက မတညျမွဲနိုငျတာမလို့ကိုယျနဲ့ ဉာဏျရညျခွငျးမကှာပဲ အကငျြ့ စာရိတ်တ ခွငျး ထပျတူကတြဲ့ သူမြိုးကိုသာ လကျတှဲဖျောအဖွဈ ရှေးခယျြမှာ နှလုံးအေးရပါမယျနျော…
အလုပ်ကြိုးစားနေလို့မင်းအတွက်အချိန်မ ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေမှာသာယာနေတုန်းလား???